M nwere ike a bit ukwuu fun na iMovie on video a! Nke a bụ nzukọ izizi nke Southside Smoosier Tech Club na Egwuregwu Bean.
Soro klọb na Obere Indiana. Anyị ga-ahụ gị ọnwa na-abịa!
Tags: imewe email imewenjem ụlọ ọrụ
Jul 7, 2008 na 11:59 PM
OZI! Ọrụ nhazi ngwa ngwa. Enwere m ike izute izu abụọ ma ọ bụ kwa ọnwa. Enwere m olile anya na agaghị m enwe ọtụtụ egwuregwu bọọlụ bọọlụ nwere okpukpu abụọ ga-eme n'ọdịnihu.
Jul 8, 2008 na 12: 38 AM
Nnukwu mkparịta ụka, nwere obi ụtọ na nzukọ nnabata. Kwuru banyere ihe niile site na Haliburton ruo VOIP.
Jul 8, 2008 na 9: 17 AM
Kwesịrị iji 'Southside' site na feat. Kanye West. Eleghi anya ọnwa na-abịa? 🙂
Jul 8, 2008 na 1:22 PM
Woo-hoo, ama m. Nnukwu vidiyo. Nchịkọta dị mma